एकै दिन १ अर्ब ३५ करोडको शेयर कारोबार, यी हुन् सर्वाधिक कमाउने ५ कम्पनी | गृहपृष्ठ
Home मुख्य खबर एकै दिन १ अर्ब ३५ करोडको शेयर कारोबार, यी हुन् सर्वाधिक कमाउने ५ कम्पनी
on: April 25, 2019 मुख्य खबर, लगानी
वाणिज्य समूहको मात्रै ७० करोडको शेयर कारोबार
वैशाख १२, काठमाडौं (अस) । साताको अन्तिम दिन रू. १ अर्ब ३५ करोडको शेयर कारोबार भएको छ । १७६ कम्पनीको ४५ कित्ता २१ हजार ९६६ कित्ताको सो रकम बराबरको शेयर कारोबार भएको हो । कारोबार भएका १० समूहको परिसूचक बढेपछि नेप्से १२ दशमलव ८३ अंकले बढेर १ हजार २९२ दशमलव १२ विन्दुमा पुगेको छ । वाणिज्य समूहको रू. ७० करोड १८ लाख बराबरको शेयर कारोबार भएपछि कारोबार रकम बढ्न पुगेको हो । सो समूहको ५ हजार ५४४ पटकको कारोबारमा २३ लाख ५८ हजार ५५२ कित्ता शेयर कारोबार भएको हो । दोस्रोमा विकास समूहको रू. ६ करोड १२ लाख बराबरको शेयर कारोबार भएको छ ।
१ हजार २७९ दशमलव ६७ विन्दुबाट शुरू भएको परिसूचक १ हजार २९६ दशमलव ९३ विन्दुसम्म पुगेको थियो । अन्त्यमा १२ दशमलव ८३ अंकले बढेर १ हजार २९२ दशमलव १२ विन्दुमा बन्द भएको छ । नेप्सेले १३ सय विन्दुको मनोवैज्ञानिक परिक्षण गरिरहेको छ ।
विकास बैंकको शेयरमा आकर्षित लगानीकर्ता
बिहीवार विकास समूहको परिसूचक २ दशमलव ९४ प्रतिशतले बढेको छ । लगानीकर्ताहरु शाइन रेसुङा डेभलपमेण्ट, महालक्ष्मी विकास बैंक, सांग्रिला डेभलपमेण्ट बैंकको शेयर तर्फ आकर्षित भएका हुन् । तेस्रो त्रैमासको विवरणमा यी कम्पनीहरुले उच्च नाफा कमाएको हल्ला र वित्तीय अवस्था राम्रो भएकाले पनि कम्पनीहरुको शेयर मूल्य बढ्न पुगेको हो ।
बिहीवार सर्वाधिक कमाएका पाँच कम्पनी
९ वाणिज्यको सर्वाधिक शेयर कारोबार
बिहीवार नौ वाणिज्य बैंकहरुको सर्वाधिक शेयर कारोबार हुँदा वाणिज्य समूहको कुल रू. ७० करोड १८ लाख बराबरको शेयर कारोबार भएको छ । त्यसैगरी, विकास बैंकको रू. ६ करोड १२ लाख बराबरको शेयर कारोबार भएको छ । नेपाल बैंकको सर्वाधिक रू. १८ करोड ४१ लाख बराबरको शेयर कारोबार भएको छ । दोस्रोमा एनसीसी बैंकको रू. ७ करोड ३० लाख बारबरको शेयर कारोबार भएको छ ।